केपी ओली: नेपालका प्रधानमन्त्री ‌ओलीले कुन घरमा सुने ‘भाँडा बजेको’ – Mero Pradesh TV
केपी ओली: नेपालका प्रधानमन्त्री ‌ओलीले कुन घरमा सुने ‘भाँडा बजेको’
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले देशबासीको नाममा सम्बोधन गर्दै नयाँ वर्षको शुभकामना दिए। कोरोनाभाइरसको सङ्क्रमणलाई लिएर सरकारको तर्फबाट दृढता दर्शाए र नागरिकलाई आश्वस्त तुल्याउने प्रयास गरे।
तर त्यही मौकामा उनले कोरोनाभाइरसको सङ्क्रमण रोकथाम र नियन्त्रणमा चालिएका कदमसँग जोडेर एउटा प्रसङ्ग निकाले।
प्रधानमन्त्री ओलीले भने, “भनिन्छ, अनिकालमा घरभित्रका भाँडाहरु बज्न थाल्छन्। तर, त्यसलाई रडाको मच्चिएको ठान्नु भूल हुन्छ। मन आत्तिएको, भत्किएको बेला गर्नेले गरेन कि भन्ने मनमा पैदा हुन सक्छ।”
उनको त्यो भनाइ सरकारी कमदप्रति व्यक्त असन्तुष्टितर्फ लक्षित थियो। जुन कुरा उनले लगत्तै प्रकट गरेका धारणाले थप प्रस्ट पारेका छन्।
भ्रममा को, कस्ले मन कमजोर?
प्रधानमन्त्री भन्छन्, “गरेको पुगेन कि भन्ने लाग्न सक्छ। अझ छिटो, अझ राम्रो र तत्काल परिणाम आउने गरी काम गरिदिए हुन्थ्यो भन्ने लाग्न सक्छ। तर अन्योल र भ्रममा पर्ने या बिचलित हुने होइन। मन बलियो बनाउनु आवश्यक छ।”
प्रश्न उठ्छ, ‘अन्योल वा भ्रम’मा को छन्? उनले को ‘बिचलित’ भएको देखे? कस्ले ‘मन बलियो’ बनाउन् भन्ने प्रधानमन्त्रीको आग्रह हो?
प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाले ‘अलि अभाव, गरिबी, संस्कार कम भएका ठाउँमा गरिबी प्रकट हुने भनेको रित्ता भाँडा बज्ने, बजाउने कुरा प्रकट हुन्छ भनेर प्रधानमन्त्रीले आम समाजको कुरा गरेको’ बताए।
उनले कुनै पार्टी वा सरकारको कुरा प्रधानमन्त्रीले नगरेको जनाए।
तर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल निकट एक नेताले प्रचण्डको अभिव्यक्तितर्फ प्रधानमन्त्रीले सङ्केत गरेको ठम्याएका छन्। उनका बुझाइमा भाँडा बजेको नेकपाको घरभित्रै हो।
प्रचण्डले कोरोनाभाइरसको सङ्कटलाई लिएर सर्वदलीय उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रको प्रस्ताव अघि सारेका थिए।
जुन कुरा प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूसँगको भिडियो संवादमा प्रधानमन्त्रीले अस्वीकार गरेको सल्लाहकार थापाले संवाददाताहरूलाई बताएका थिए।
सरकारले योजनावद्ध र समन्वयात्मक ढङ्गले काम गरिरहेको प्रधानमन्त्रीले बताएको जानकारी दिँदै उनले भने, “सरकारलाई १५-१५ दिनमा वा आवधिक रूपमा कुनै ढङ्गले निर्देशन दिने खालको र सरकार त्यस ढङ्गले चल्ने खालको नबुझ्न, नबुझाउन र त्यस ढङ्गको प्रयास नगर्न र त्यसखाले संयन्त्रको खोजी नगर्न पनि सबैलाई बडो स्पष्ट हुनका निम्ति स्पष्ट रूपमा आफ्नो धारणा राख्नु भएको छ।”
पूर्व एमाले ‘एकढिक्का’
नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा बीबीसीसँग कुरा गरेका माधवकुमार नेपाल पक्षीय ती नेताका भनाइमा प्रधानमन्त्रीले अस्वीकार गरिदिएको त्यस विषयमा पूर्व एमाले नेताहरू एक भइदिएपछि प्रचण्डलाई ‘धक्का’ लागेको छ।
अहिले भूमिका बिहीन अवस्थामा प्रचण्डलाई उकुसमुकुस भइरहेकाले त्यस्तो प्रस्ताव गरेको उनको बुझाइ छ।
नाम नखुलाउन नचाहने ती नेकपा नेताका बुझाइमा सबैतिर नेकपाको बर्चस्व रहेका बेला सबै दलको प्रतिनिधित्व हुने त्यो प्रस्ताव नेकपाको हितमा हुँदैन।
उनी भन्छन्, “संयन्त्रले निर्णय गरेपछि सरकारले कार्यान्वयन गर्ने घाँडो किन बनाउनु। अर्को कुरा जननिर्वाचित प्रतिनिधिहरू भएको बेलामा त्यसो गर्नु लोकतान्त्रिक सैद्धान्तिक कुरा पनि हुँदैन। त्यसमा एमाले पङ्क्ति करिब करिब एक जस्तो भइदियो।”
तर प्रचण्ड निकट अर्का नेताका भनाइमा प्रचण्ड आफ्नो भनाइमा अडिग छन्।
“महामारीकाविरूद्ध सिंगो देशलाई केन्द्रित गर्नकालागि उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्र प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा बनाउँदा त्यसबाट अझै पहलकदमी लिन सकिन्छ र सबै दलसँग समन्वय र सहकार्य हुन्छ भन्ने ढङ्गले बोल्नु भएको थियो।”, उनले भने, “तर प्रचण्डले अर्को विकल्प बनाउन लागे कि क्या हो भन्ने बालुवाटारमा परेछ।”
उनका बुझाइमा प्रधानमन्त्री स्वयम्‌लाई त्यस्तो आभास परेको छैन। तर उनकै शब्दमा ‘वरिपरिका मान्छेमा आतङ्क’ नै भएछ।
‘भाँडा बज्न थालेको’ प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिलाई प्रचण्ड निकट ती नेताले प्रधानमन्त्रीको ‘शैली’ भनेर अर्थ्याए र त्यो ‘प्रचण्डलाई पचिसकेको’ बताए।
उनले भने, “उहाँहरूले जेजे भने पनि अध्यक्ष (प्रचण्ड) को मूल कुरा भनेको राष्ट्रको निम्ति सबै दल केन्द्रित गरेर सरकारलाई नै सघाएर जानुपर्छ, त्यो भन्दा अर्को विकल्प छैन भन्ने नै छ।”
विभिन्न राजनीतिक नियुक्ति र बढुवा लगायतका कुराहरूले पनि प्रधानमन्त्री र प्रचण्डबीच पछिल्लो समय दुरी बढेको बताइन्छ।
‘पहिल्यैदेखि नै प्रधानमन्त्रीको काम गर्ने चलन त्यस्तै रहेको र सरकारले निर्णय गर्‍यो ठिकै छ’ भन्ने प्रचण्डको बुझाइ रहेको उनले बताए।
विभाजित कम्युनिष्ट पार्टीहरुलाई एकताबद्ध हुन प्रचण्डको आह्वान
नेकपाको सचिवालय बैठकले सभामुखमा अग्नी सापकोटलाई उम्मेदबार बनाउने निर्णय
सुनिलबहादुर थापा आज नेपाली काँग्रेसमा प्रवेश गर्ने